Pattinson lihunyushwa lisuselwa French njengoba isidlo semifino. Igama unikezwa hhayi ngengozi, ngoba ngenxa ukuma squash yayo zokupheka akuzona workpieces ikakhulukazi eziyinkimbinkimbi, izinto ukhululekile kakhulu.
Squash kungokwalabo Cucurbitaceae umndeni okudume kakhulu Melika nase-Canada, e-Russia, i-squash zivamile ngokwanele, futhi ngeze, ngoba isitshalo ewusizo kakhulu futhi ngokuphamazela kuqukethe asebenzayo izakhi mkhondo kanye Antioxidants, imiphumela ezuzisayo emzimbeni womuntu.
Qoqa emhlabeni scallop ngosuku lwesithupha of nokuvuthwa, njengoba kuba ngalesi sikhathi embozwe amathanga ukuphaphatheka oluhlaza mncane-uhlinzwe futhi inyama nokunwebeka. Shiya scallop embhedeni isikhathi eside akukwazi, ngoba ziba mhlophe bese uba ongakulungele ukudliwa. Fresh abasha squash zokupheka kunzima kubala, ungakwazi ubilise, sikadali, gazinga, amakhekhe, wenze nezibiliboco, amasaladi, ukugxusha, usawoti, amanzi okugqumisa ... Ngokuvamile, ungakwazi ukupheka ezihlukahlukene izitsha Ugalonci zokupheka aqukethe izithako ezivamile.
esihlwabusayo kakhulu etholwe enososo scallop zokupheka ingaqukatha marinades ezahlukene: kungaba ene-asidi kancane noma okubabayo. I marinades Ukwakheka ngempela zihlanganisa uviniga, okuyinto ungayithola enye by citric acid, ushukela, usawoti kanye ezihlukahlukene namakha, ethandwa kakhulu zazo kubhekwe clove, usinamoni, i-bay leaf dill kanye Mint. Isetshenziswa endaweni marinade garlic, iparsley horseradish amacembe nezimpande ezenza imifino pickled iqinile futhi fresh.
Pickles kungaba abukhali noma ene-asidi kancane - lokhu kuye ngokuthi lemali uviniga noma citric acid. ukhukhamba Spicy ingagcinwa ngaphandle inzalo. I amanzi okugqumisa yokuqala eyatholakala uma ngesisekelo ukuthatha omuncu apula juice. Kulokhu, asikho isidingo wengeze uviniga.
Sinikeza iresiphi pickled squash.
Ukupheka ke udinga hhayi elikhulu, nge ikhasi mnene off. Kufanele kuzohanjiswa ukususa Isiqu kanye Blanch emanzini abilayo imizuzu 5, ngemva kwalokho izithelo selehlile ngamanzi agobhozayo. Khona-ke ama-scallop uthathe 4-8 izicucu (elincane akakwazi usike) futhi ibekwe ku izimbiza inzalo, ukufafaza dill oqoshiwe nesweli olwembiza. Ukuze nokucija kungenziwa efakwa imbiza ngalinye ucezu eCayenne pepper kanye ezimbili noma ezintathu ehlutshiwe pepper pod.
Parsley, dill, Mint, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi futhi horseradish amahlamvu bafa bese zisakazwa phansi amabhange, phakathi futhi phezu imifino. Khona-ke uthele abilayo marinade squash. Khona-ke amabhange embozwe ofeleba ahlanzekile abilisiwe futhi pasteurized imizuzu 12-15. Ukulungisa marinade ngoba ethela ilitha amathini uzodinga 350 namamililitha lamanzi, 20 amagremu kasawoti, 20 amagremu ushukela 50 ml 6% uviniga.
Ungakwazi ukupheka scallop noshukela - ke uthole ujamu ezihlwabusayo kakhulu. Izithelo kudingeka ikhasi futhi imbewu, uthathe yizicucu bayigubungele ngamanzi abandayo amahora amahlanu. Ngemva kwalokho twist amaskwatjhi grinder inyama. Besuka komunye kg ushukela 0.5 amalitha amanzi is isiraphu abilisiwe ke ukungezwa futhi abilisiwe scallop ne eshukumisayo kuze kuphekwe.
Abalimi nayizimfundamakhwela kanye ochwepheshe sikwazisa lokhu semibhida, ngoba uyazi ukuthi scallop zokupheka amalungiselelo ebusika yavama - ungakwazi ukugcina ngokuphelele yokugcina isikhathi eside. Ngesikhathi imifino efanayo isikhathi eside qinani izakhiwo wabo ozuzisayo futhi ingagcinwa emiphongolweni isikhathi esingaphezu konyaka. Caviar, ukhukhamba futhi ukhukhamba ehlukahlukene ukwenza ithebula ezihlukahlukene umndeni kanye gourmet.
Ngokuvamile, ekhaya ukuwafaka eRussia kwandile, njengoba evumela wonke umndeni ukunikeza Vitamin imikhiqizo okusemathinini lonke ekwindla nasebusika isikhathi. It kuphela idinga unamathisele isandla, ukubekezela, amakhono nothando umuntu wakubo.
Nethempeli Xenia ka Petersburg ngo Beskudnikovo namuhla nakusasa
Kanjani Quartz Buka?
Eziyimpumelelo "Igazi iwayini" ( "Witcher 3"). ezahlukeneyo eziyimpumelelo
Beam eyelashes - enhle, enakho, futhi fast!